आज कोरियन भाषाको परीक्षा हुदै ,कोरियामा के छ र युवा मरीहत्ते गर्छन ? – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > समाचार > आज कोरियन भाषाको परीक्षा हुदै ,कोरियामा के छ र युवा मरीहत्ते गर्छन ?
२५ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०८:४९
शनिबार र आइतबार ९२ हजार युवाले कोरियन भाषाको परीक्षा दिँदैछन् । यीमध्ये १० हजारले मात्रै कोरिया जाने सीमा अटाउन सक्छन् । वर्षैपिच्छे कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल हुनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । तर, कामदारको कोटा खासै बढेको छैन । यसले प्रतिस्पर्धा कडा बन्दैछ भने युवा असफलताको कारण निराशा पनि झाँगिँदैछ ।
१२ वर्षबीचमा इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम ९ईपीएस० भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने नेपालीको संख्या ६० हजार नाघेको छ ।
अहिले नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब मासिक एक लाख ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोरियाले कृषि तथा उत्पादनमुलक ९उद्योग० समूह विभाजन गरी कामदार लैजान्छ ।
कन्चनपुरमा गोलि चल्यो,प्रहरीको गोलि लागि ४ घाइते,एकको अवस्था गम्भीर
खानेपानी मन्त्रि विना सफल कि असफल ?